Otu esi eji oche-twine mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị - mmega ahụ, ịgbatị, mkpanaka maka twine
Otutu ndi mmadu kwenyere na ogwu di nma maka ndi na-eto eto. N'ezie, ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike ijikwa twine cross, nke nwere ọtụtụ isi ihe dị mkpa gbasara nkà na ụzụ. Idebe iwu nke ọzụzụ na ịmara ihe omume ndị dị mkpa, ị nwere ike ị nweta utịp dị mma n'oge na-adịghị anya.
Kedu twine dị mfe karịa ogologo oge ma ọ bụ na-agafe?
Ọ bụ ezie na mmadụ nile bụ onye ọ bụla na onye dị mfe ịgafe, na nkwụsị nke ogologo oge, a na-ele nke abụọ anya dị mfe. Iji mee ya, otu ụkwụ na-aga n'ihu, na nke ọzọ - azụ. Mkpịsị ụkwụ longitudinal gụnyere itinye aka na ụkwụ abụọ n'akụkụ dị iche iche. Ndị a bụ ụdị ejima ndị a kachasị atụ aro ka ha mụta n'aka, malite na nhọrọ dị mfe. Ndị dọkịta na-ekwu na ihe dịka pasent 13 nke ndị mmadụ apụghị ịrụgharị ejima na-agagharị n'ihi na ọkpụkpụ pụrụ iche nke hip.
Nwunye ziri ezi
Ihe kachasị dị mfe nke ịmịkọrọ obe bụ na a ga-emechi sọks ahụ elu na ikpere ga-eduzi n'ebe ahụ. N'ịkọwa otú ị ga-esi nọrọ ọdụ n'elu eriri, ị ga-amara na nhọrọ ahụ, mgbe ụkwụ na ikpere ụkwụ na-atụ anya ya, otu ahụ ziri ezi ma a na-ele ya anya nke ukwuu ma mụta ime ya enweghị ike. Ọ dị mkpa ijide azụ na ọkwa dị oke ala n'oge ejima ahụ.
Ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ya n'eziokwu, mgbe oge gafechara ka ị nweta ihe ọma, ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe kwesịrị iburu n'uche ebe a. Ọ dị mkpa ịmara otú e si agbatị ejima ahụ na-agagharị, na-eburu n'uche na otu nwoke na-agbatị aka, ihe ọgbọ ya, ọkwa nke mgbanwe nke anụ ahụ na njikọta. Tụkwasị na nke a, ọnụ ọgụgụ na ọnọdụ nke okwu ọzụzụ. Okwu karia ma obu ihe di omimi bu otutu ọnwa.
Kedu ka esi anọdụ n'obe obe?
E nwere ndepụta ụfọdụ nke iwu ndị mmadụ ga-eburu n'uche na ha chọrọ inweta ihe dị mma n'ịgbatị.
Mee ya kwa ụbọchị, ọkacha mma ugboro abụọ: ụtụtụ na mgbede. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, buru n'uche na ihe kachasị mkpa bụ ọzụzụ anọ n'otu izu.
Mgbatị na twine transvers kwesịrị ịmalite na-ekpo ọkụ ma na-arụ ọrụ cardio omume dị oke.
N'ime ụlọ ebe a na-eduzi ọzụzụ ahụ, ọ kwesịrị ikpo ọkụ na ụkwụ kwesịrị itinye akwa agụ, nke ị nwere ike belata ihe ize ndụ nke ịgbatị.
Ọzụzụ kwesịrị ịgụnye nha nha nke ihe omimi na ihe omimi.
Iji nọrọ n'obe, ọ dị mkpa ka ị na-eku ume mgbe niile. Na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na-ejideghị ume gị.
Mmega ahụ maka ịgbatị na twine
E nwere ọtụtụ omume dịgasị iche iche maka ịgbatị, anyị na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na mmegharị dị mfe ma dị irè:
Malite na "Nkwuba", nke ị na-anọdụ n'elu ụlọ, na-ehicha ụkwụ gị ma jikọta ụkwụ. Mee ka ikiri ụkwụ dị nso n'anụ ahụ ka o kwe mee ma mee ka ikpere gị gbadaa n'ala. Jide na oke esemokwu maka nkeji.
Maka mmega ahụ na-esote maka ejima obe ị ga-anọdụ ala n'ala ma gbatịa ụkwụ gị. Pịgharịa gaa ruo mgbe i nwere ike kechie ụkwụ gị gburugburu. Jide ihe kariri 10 sekọnd.
Squat maka ọkara ọkara. Na-ekpuchi ikpere na ikpere ya. Na-ebugharị ibu dị n'otu ụkwụ, nke ọzọ - dọpụta ya n'akụkụ, na-adọta mkpịsị ụkwụ ahụ. Mee ka ikpere ụkwụ gbanye gị aka. Debe okwu ahụ maka otu nkeji ma kwuo otu ihe ahụ n'akụkụ ọzọ.
Guzo na ikpere gi ma jiri aka gi dina n'ala. Mee ka ikpere gị dị iche iche dị ka o kwere mee, ọ bụrụ na o kwere mee, ha kwesiri ịmalite n'akụkụ aka nri, ma gaa na nkwekọrịta. Nọgide na-etinye maka ọkara nkeji.
Ịnọdụ na-agbasapụ ụkwụ dị ogologo, na-edepụta sọks elu. Gaa n'ihu, na-edebeghachi azụ gị n'ọnọdụ ziri ezi. Ihe mgbaru ọsọ bụ iji aka gị banye n'ala.
Igwe na-eme ihe maka twine
E nwere atụmatụ pụrụ iche nke na-enyere aka ịmalite ịgbatị ma kụziere gị ka ị nọdụ na twine. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịgbanwe nsogbu ahụ ma belata ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ. E nwere simulator maka twine transverse, nke na-enye ohere maka ịgha ụgha, nke na-enye ezumike dị mkpa nke ahụ ike, nke a na-emekwa ka mmetụta nke ọzụzụ dịkwuo mma. E nwere ụdị dị iche iche nke ndị yiri simulators, nke na-ekewa n'ime otu:
Ogige dị mfe . Ngwaọrụ gụnyere akụkụ abụọ na-ezukọta na osisi. Ha nwere mkpọchi abụọ kwụsịrị n'elu osisi ahụ. Na mgbakwunye, enwekwara akara nchekwa, ya mere i nwere ike ịzụ onwe gị.
Okpokoro . A na-eme mkpanaka maka twine cross-na-ụlọ na usoro nke gụnyere akụkụ atọ. A haziri ha abụọ maka ụkwụ, ha bụ ihe ntụchi n'ogologo ya, a na-etinyekwa nke nta nke atọ n'etiti ndị ọzọ abụọ na ya na ị nwere ike ịgbanwe ogo nke ịdọ aka.
Nlekọta ọzụzụ zuru oke p. Ngwaọrụ nwere oche na legroom. Nhazi ahụ nwere ọtụtụ ebe a na-edozi ụkwụ na ụkwụ na-ejikọta n'ọtụtụ ebe. Ngwa maka nkpu cross bụ oke na oke.
Kedu otu esi anọdụ ala n'elu twine n'izu?
Ọtụtụ ndị, na-agbatị aka, na-atụ anya n 'utịp ngwa ngwa, ma ọ bara uru ịmara na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ịnọdụ ọdụ na twine mgbe otu izu nke ọzụzụ na ọbụna otu ọnwa iji mee ya agaghị arụ ọrụ. Atụmatụ kachasị mma maka ndị nwere ezi ahụike bụ 5-6 izu. Enwere ọtụtụ ndụmọdụ site na ndị ọkachamara na-esi esi ngwa ngwa nọdụ na obe-twine:
Ọ dị mkpa ịgbanwe ihe oriri na-edozi ahụ, na-ahọrọ protein protein, nke kwesịrị ịdịkarịa ala 2.5 grams kwa kilogram nke arọ ahụ.
Ọ bara uru iji ngwaahịa ndị meziwanye ọnọdụ nkwonkwo, ma ndị a bụ ndị nwere gelatin: jelii, oyi , cartilage na ihe ndị ọzọ.
Ekwula onwe gị ibu arọ, ma gee ntị n'ihe mmetụta dị n'ahụ gị, mgbe ahụ ọ nweghị mmerụ ahụ dị egwu.
Ulo oru maka obere akuko
Ihe omume na biceps
Ihe omume iji belata olu nke hips
Kedu ka esi kwatuo akuko?
Omume maka aka ụmụ agbọghọ
Omume ahụ maka ịmị afọ na n'akụkụ
Kedu otu esi kpochapu elu maka otu izu?
Na-agba ọsọ na ebe
Ngosiputa maka uru nke aka
Thyroxine maka ụkọ ọnwụ
Jerusalem atịchok - bara uru Njirimara
Migraine na aura
Aerator maka akwarium
Diana Ignatyuk na-enweghị etemeete
Gini mere ntughari bara uru?
Foto ndị dị na swimsuit
Barbra Streisand megide agbamakwụkwọ nke Josh Brolin
Nhọrọ maka imecha loggia
Ahia Peshia nke nwamba
Egwuregwu na-acha odo odo
Nchikota akwụkwọaja n'ime ime
Nwere ike imeju ahụ?
Mmetụta nke anụ ahụ dị oke oke n'ime ụmụ nwoke
Kedu ihe ị ga-eri na ọnya?
Angelina Jolie na-enwe ọmụmụ ihe maka ụmụ akwụkwọ London School of Economics